ကလေးတွေ မကြာခဏ ငိုယိုသောင်းကျန်း၊ ဂျီကျတဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄ ချက် ( June,2022) (ကလေးအပြုအမူဆိုင်ရာ ပြသနာများ) လမ်းလျောက်တတ်စကနေ ကျောင်းနေစကလေးတွေ အော်ဟစ် ငိုယိုသောင်းကျန်းကြတဲ့...
Colonoscopy (အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း ) ( June, 2022 )
အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း ( June, 2022)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ၁။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ကြည့်သင့်ပါသလဲ? ဗိုက်အောင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိဖို့။ ကြာရှည် ၀မ်းလျှော၀မ်းပျက်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိဖို့။ အူမကြီးကနေသွေးထွက် (၀မ်းသွားတဲ့အခါ စတော်ဘယ်ရီ‌...
တယ်လီကျန်းမာ တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရစကား (၃) – ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် (ရုပ်/သံ)
တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့ အွန်လိုင်းဆေးခန်း တစ်နှစ်ပြည့် (၁၉-၆-၂၀၂၁ မှ ၁၉-၆-၂၀၂၂) အမှတ်တရစကား (၃) ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့အွန်လိုင်းဆေးခန်းဖွင့်ချိန်- နေ့စဉ် နံနက်...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တယ်လီကျန်းမာဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ” တယ်လီကျန်းမာ တစ်နှစ်ပြည့် “အတွက် အမှတ်တရ ဆောင်းပါး….
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ DrM လို့ခေါ်ပါတယ်။ တယ်လီကျန်းမာမှာ ဝင်ရောက်ကူညီပေးနေတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်ဖွားဆရာဝန်တစ်ဦးပါ။ ကျွန်တော်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်အဖြစ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါး နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဆေးကုတာတင်မက စာသင်တာတွေ...
Telekyanmar Theme Song ( Video)
တယ်လီကျန်းမာ Theme Song တယ်လီကျန်းမာ ဝိုင်းတော်သားများ ရေးစပ်၊ သီဆို၊ တီးခတ်၊ Mixing ဆွဲ၊ Edit လုပ်ထားသည်။ “NUG, MOH တယ်လီကျန်းမာ...